Bilxiginnaan suuta suutaan dhimma Hoggantoota Siyaasaa keenyaa dirree qilleensa siyaasaa irraa buustee kophaadhuma ishee ragaduuf socho’aa turte. – Kichuu
HomeNewsAfricaBilxiginnaan suuta suutaan dhimma Hoggantoota Siyaasaa keenyaa dirree qilleensa siyaasaa irraa buustee kophaadhuma ishee ragaduuf socho’aa turte.
Bilxiginnaan suuta suutaan dhimma Hoggantoota Siyaasaa keenyaa dirree qilleensa siyaasaa irraa buustee kophaadhuma ishee ragaduuf socho’aa turte.
Duulli Lagannaa Nyaataa gaggeeffames akka isaan jalqabarra itti qoosaa turan hin taane. Ogeeyyin fayyaa dhimma kana irratti Kaadreen akka feete lallaaquu hin dandeessu jennaan afaan isaanii cuqqaalachuudhaan ala waan godhan dhaban. Ogeeyyummaan fayyaa xurumbaa ololaa oofuu miti. Dhiibbaan Siyaasaa Sirna Cunqursaa kanarratti godhamus guyyuu garmalee dabalaa amma immoo sadarkaa ol’aanaa irra gahee jira. Ameerikaanis Awrooppaanis garaa sirnichatti jabaataniiru!
Adduunyaan kallattii hundaan itti muddaa jirti. Ummanni keenya kuun faaydaan, kuun waraanaan ukkaamfamus sagaleen isaa garuu ukkaamamee hafaa hin jiru. Yakki Sirnichi hojjataa jiru guyyuu saaxilamaa jira. Warri aangoorra jirus Tasgabbaa’anii biyya gaggeessuuf cinqamanii jiru.
Gama birootiin ABOfi KFOnis ejjannoo wal fakkaataa calaqqisaa jiru. Kuni injifannoodha! Injifannoo Siyaasaati. Ololaaf Xurumbaa kijibaa hin ilaalinaa. Mootummaan muddama hamaa keessa jira. Wayyaanenis akkanumatti muddamtee aangoo irraa qaarite. Abiyyis osoma dheebotu, osoma haafawu, osoma harki dhiigaan xuraawu konkolaatee qilee dhaquuf jira! Gareen isaas akkasuma. Yeroon isaas fagoo miti. Yeroo dhiyootti kana arguuf jirra, Abdii Rabbiitin!
Mahammad Jamal Abrahimee
እኝህ ሰው ” ኸርማን ክሩስ ይባላሉ ” የአፋን ኦሮሞን ቋንቋ ሲናገሩ ማትያስ ጉዲናን ውጦ ነው እንዴ ያስብላሉ ??
” ነፍጠኛ ” ማለት :-
1, ኦሮሚያ ውስጥ ተወልዶ አድጎ :አፋን ኦሮሞን ተፀይፎ አድጎ : በአማርኛ ትምህርት ቤት ካልተከፈተልኝ ሞቼ እገኛለሁ የሚል ነው ::
2, በኢትዮጵያ የም/ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ደረጃ ላይ ፣ ለሁለት አስርት አመታት ቁጭ ብሎ ፣ የ “ Hermann Kruseን“ ያክል ባይናገር እንኳን ጥቂት የአፋን ኦሮሞ ፣ ቃላቶችን ለማወቅ እራሱን ዝግጁ ያላደረገና ፣ ኦሮሚያ ሲመጣ
” ያደበሌ ዲማሙ ” ብሎ ህዝብ ላይ የሚያላግጥ ነው ::
3, ኦሮሞም ሆኖ ፣ አፋን ኦሮሞን የፌደራል የስራ ቋንቋ እንዳይሆን ፣ ተልካሻ ምክንያቶች ፣ እየፈጠረ ምርጫ በመጣ ቁጥር ፣ ለምርጫ ቅስቀሳ የሚጠቀም ገልቱ ፣ ላዩ ኦሮሞ ነኝ የሚል ውስጡ ግን ነፍጠኛ የሆነ ፓርቲ ።
“You should have finished off the survivors,” the cameraman says in Amharic, Ethiopia’s lingua franca, in an apparent rebuke of the perpetrators of the massacre. These are scenes from a video clip obtained exclusively by The Telegraph showing the first evidence of what appears to be a war crime carried out by the Ethiopian army. Around 40 bodies in civilian clothes can be seen in the four-minute clip.
Presdantiin Tarkii RassibXayyib Erdoogan mootumman Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti rakkachaa jiru akka gad-lakkisuu bilbilaan Dr.Abiyyi Ahmad gaafataniiru.